Xasan Kheyre oo sheegay qorshaha cad ee DF kaga aadan amniga Somalia - Caasimada Online
Home Warar Xasan Kheyre oo sheegay qorshaha cad ee DF kaga aadan amniga Somalia
Xasan Kheyre oo sheegay qorshaha cad ee DF kaga aadan amniga Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Cali Kheyre ayaa shaaca ka qaaday in Xukuumadiisu ay wado qorshooyin badan oo lagu adkeynaayo amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan kan Gobolada dalka.
Ra’isul wasaare Kheyre waxa uu sheegay in ahmiyada koowaad ee Xukuumadiisu ay tahay mid lasiin doono amniga oo uu tilmaamay inay kula xisaabtami doonaan dhammaan shaqsiyaadka ku magacaaban Hay’adaha amniga.
Xukuumada Somalia ayuu sheegay in ahmiyad gaara ay u aragto xasilooni ka dhalata Somalia, si buu yiri shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursado ay uga nasankaraan Qaraxyada iyo wax waliba oo dhibaateynkara amniga.
‘’Xukuumadu waxa ay amniga ka leedahay qorshooyin cadcad, waxaanu wakhtiga ugu badan galin doonaa amniga, xasiloonida iyo in shacabka ay ka badqabaan dhac iyo boob’’
‘’Qorshaha aan damacsanahay wey adkaan doontaa inuu fulo, si uu u fulo waa in taageero joogta ah aan ka helnaa shacabka’’
Sidoo kale, Ra’isul wasaare Xasan Kheyre ayaa dadka ka shaqeeya amni darada uga digay inay kusii dhiiradaan waxyaabaha ay ku hanweyn yihiin ee ah dhibaatada ay u maleegayaan shacabka.
Haddalka Xasan Kheyre ayaa u muuqanaaya mid ay xukuumada Somalia ku adkeyneyso xaalada amni ee dalka.